Ingqwalaselo yeShayin Mahayana Buddhist Sutras
Ingqwalasela yeBuddhist Sutras yeChina yaseChina
I- Mahayana Buddhist sutras yinyani enkulu yezibhalo ezibhalwe phakathi kwekhulu lokuqala leminyaka BCE kunye nekhulu lesi-5 CE, nangona iimbalwa zingabhalwa ngokukhawuleza nje ngekhulu lesi-7 CE. Ininzi kuthiwa ibhaliwe ekuqaleni kwesiSanskrit, kodwa ngokuqhelekileyo i-Sanskrit yasekuqaleni ilahlekile, kwaye inguqulo yokuqala kakhulu namhlanje esinokuguqulelwa kwesiTshayina.
NgesiBuddhism, igama elithi sutra lichazwe njengentshumayelo ebhaliweyo kaBuddha okanye omnye wabafundi bakhe.
I-Mahayana sutras kaninzi ibingelwa nguBuddha kwaye ngokuqhelekileyo ibhaliwe ngokungathi yirekhodi yentshumayelo kaBuddha, kodwa ayinakudala ngokwaneleyo ukuba inxulumene neBuddha yembali. Ukubhala kwabo kunye neprovenance ayinakwazi.
Izibhalo zeenkolo ezininzi zinikwe igunya kuba zikholelwa ukuba lizwi likaThixo okanye umprofeti wasezulwini, kodwa uBuddhism ayisebenzisi ngaloo ndlela. Nangona i-sutras enokwenzeka ukuba yile ntshumayelo ebhaliweyo yeBuddha yembali ibalulekile, ukubaluleka kwangempela kwe-sutra kufumaneka kubulumko obubhalwe kwi-sutra, kungekhona kulowo othi okanye wayibhala.
AmaTshayina Mahayana sutras ngabo baxutywa ngolo hlobo kwiikolo zaseMahayana ezinxulumene ikakhulu neChina neMpuma ye-Asia, kubandakanywa iZen, umhlaba omsulwa kunye ne- Tiantai . Ezi sutras ziyinxalenye yegonon enkulu yamaMahayana ebizwa ngokuba yiChina Canon. Le ngenye yezona zintathu ezinkulu zeemibhalo zeBuddhist.
Eminye i- Canon ye-Pali ne- Canon yaseTibetan . Qaphela ukuba kukho iiMahayana sutras ezingekho kwiindawo eziqhelekileyo ze-Canon kodwa zifakwe kwi-Canon yaseTibet.
Oku kulandelayo kuluhlu olupheleleyo lweChina Canon sutras, kodwa ezi yizona ziyaziwa yi-sutras.
Prajnaparamita uthetha "ukufezekiswa kobulumko," ngamanye amaxesha i-sutras ibizwa ngokuba "yi-wisdom sutras." Ezi zi malunga ne-forty sutras, eziquka iNhliziyo kunye ne- Diamond sutras , ezidibene neN Nagarjuna kunye nesikolo sakhe sefilosofi saseMadhyamika, nangona akakholelwa ukuba ubhale.
Ezinye zazo ziphakathi kwama-Mahayana sutras endala, mhlawumbi ukuthandana kwangoko kwinkulungwane yokuqala ye-BCE. Zijolise ngokukodwa kwi-Mahayana ukufundisa kwe- sunyata , okanye "ukungabi nalutho."
I Saddharmapundarika Sutra
Kwakhona ibizwa ngokuba yiLotus Sutra , le sutra enhle neyathandekayo mhlawumbi yabhalwa kwi-1st okanye yesi-2 CE. Ngaphezulu kwayo yonke into igxininisa ukuba wonke umntu abe nguBuddha.
I-Sutras ye-Land efanelekileyo.
Ezi zintathu ze-sutras ezinxulumene neBuddhism yeLizwe elungileyo yi- Amitabha Sutra ; I- Amitayurdhyana Sutra , ebizwa ngokuba yiSutra yoBomi obungapheliyo; kunye neAparimitayur Sutra . Ama-Amitabha kunye neAparimitayur ngamanye amaxesha abizwa ngokuba yifutshane kunye neSukhavati-vyuha okanye iSukhavati sutras . Ezi sutras zikholelwa ukuba zibhaliwe kwikota yokuqala okanye ye-2 CE.
Ngamanye amaxesha i- Vimalakirti Sutra idibaniswa ne-Pure Land sutras, nangona ihlonishwa kuyo yonke i-Mahayana Buddhism.
Kule qela leqela le-sutras elona liyaziwayo mhlawumbi yiMahayana Parinirvana Sutra , ngamanye amaxesha kuthiwa yi- Nirvana Sutra . Ininzi yeTathagatagarbha sutras kucatshangelwa ukuba ibhaliwe kwi-3 leminyaka CE.
I-Tathagatagarbha isho ukuba "isizalo sikaBuddha," kwaye umxholo wale qela le-sutras nguBuddha Nature kunye namandla abo bonke abantu ukuba baqonde uBuddha.
I-Third Turning Sutras
I- Lankavatara Sutra eyaziwayo, mhlawumbi iqulunqwe ngekhulu le-4, ngamanye amaxesha idibaniswa neTathagatagarbha sutras kwaye ngamanye amaxesha kwelinye iqela le-sutras libizwa ngokuba yi-Third Turning Sutras. Ezi zidibene nefilosofi yaseYogacara .
Kwakhona kuthiwa i- Flower Garland okanye i- Flower Ornament Sutra , i- Avatamsaka Sutra ngumqoqo omkhulu weetekisi eziye zabhalwa kwixesha elide, ukuqala ngekhulu le-1 CE kunye nokuphela kwekhulu le-4. I-Avatamsaka iyaziwa kakhulu ngenxa yeenkcazo zayo eziqaqambileyo zokuhlala phakathi kwazo zonke iziganeko.
I-Ratnakuta okanye i-" Jewel Heap " iqokelela malunga nama-49 aseMahayana asekuqaleni kwimibuzo engaphambi kwePrajnaparamita sutras. Zihlanganisa iintlobo ezahlukahlukeneyo.
Ezinye i-Sutras zeNqaku
I- Surangama Samadhi Sutra nayo ibiza ngokuba yiHroicic Progress okanye iHeroic Gate Sutra, yintsapho yaseMahayana sutra esichaza inkqubela phambili ekucamngeni.
Emva koko iSarangama Sutra yayinempembelelo ekuphuhlisweni kweChan (Zen). Iquka izihloko eziliqela, kuquka samadhi.
I- Mahayana Brahmajala Sutra , engafanele idideke ne-Pali sutra yegama elifanayo, inokuba ibhaliwe ekupheleni kwekhulu lesi-5. Kubaluleke kakhulu njengomthombo wamaMahayana okanye iBodhisattva.
I- Mahasamnipata okanye iNdibano ePhambili i-Sutra ixubusha ukuhla kwexesha elizayo lokufundisa kukaBuddha. Kwabhalwa kwangaphambili ngaphambi kwekhulu le-5.
Kukho kwakhona amaMahayana sutras azinikele kwiBuddhism esoteric , njengokwenziwa eShingon , kunye ne-sutras ezinikezelwe kwiimpawu zeempawu zodwa ezifana noManjusri no Bhaisajyaguru.
Kwakhona, oku kuluhlu olupheleleyo, kwaye ezininzi izikolo zaseMahayana zijolise kuphela kwingxenye yezi tekisi.